Sida loo tayeeyo Lugood Library
Kasta oo hadda ka dibna, qaar badan oo naga mid ah wajihi qaar ka mid ah cillado halkii cajiib ah maktabadda Lugood our. Tracks kama muuqdaan ama haddii ay sameeyaan, nuqulo tiro badan bilaabi muuqday maktabadda. Si wax loogu qabto dhibaatooyinkan oo badan, mid ka mid ah waxaa laga yaabaa inay dib u dhisaan isaga / iyada maktabada kaas oo ah habka ugu badan ee la heli karo waa sidan:
The Habka ugu badan in la tayeeyo
Xir Lugood, hel folder Lugood ee your computer / laptop ka dibna ay helaan Lugood Library.itl iyo Lugood Library.xml.
Copy files kuwaas oo ku kaydi meel kale, gal on desktop tusaale ahaan. Delete kuwa asalka ah.
Hadda furan Lugood, u tag "File" dooro "Library" iyo ka dibna "Import playlist". Browse in ay helaan folder aad u abuuray oo keliya on desktop dooro iTunes.xml ka dibna dooro furan.
Lugood bilaabi doonaa degida tareenka iyo macluumaad la xiriira ka file XML iyo bilowdo abuuro faylka cusub Lugood Library.itl.
Dib u fadhiiso oo dejiso sida habkan laga yaabaa inay qaadato xoogaa waqti ah ku xiran tirada raad joogo ee maktabadda.
Marka maktabadda ayaa si buuxda u dhisay, oo aad ka ogaan doonto in dhammaan goobaha hore aragtida mar dambe codsatay. Sidaas, waxa aad helaysaa in mar kale ay ku dabiqi.
The khasaaraha habkan waa quruxsan cad.
Laakiin aynu kaliya iyaga sheegtid haddii aad halmaamay in aan aragto: 1. Dib u dhiska maktabadda Lugood waxa ka mid ah wax badan oo shaqada buugga; heshaan fayl, iyaga nuqul meel gaar ah, tirtirto kuwa hore iyo wixii la mid ah sidaas.
2. Marxaladani waxay qaadataa ilaa waqti badan.
3. Waxaa laga yaabaa in wax qaldamaan, sida aadanaha, waxaa mar walba fursad qalad. Waxaad tirtirto laga yaabaa in file qaldan ama waxaa laga yaabaa in illoobin in ay tirtirto file asalka ama wax kale oo laga yaabaa inay keento in kharribo maktabadda halkii ay dib u dhiska
4. Waxaa laga yaabaa in wax qaldamaan, sida aadanaha, waxaa mar walba fursad qalad. Waxaad tirtirto laga yaabaa in file qaldan ama waxaa laga yaabaa in illoobin in ay tirtirto file asalka ama wax kale oo laga yaabaa inay keento in kharribo maktabadda halkii ay dib u dhiska
Si fudud Habka ay dib ugu dhistaan
Hadda oo aan ognahay waxa ay mashaqo weyn u dhiska maktabadda kuu gaar ah gacanta noqon kartaa dhammaan oo naga mid ah oo doonaya in ay dib u dhisaan maktabadaha adigoo isticmaalaya qaar ka mid kale oo ka fudud. Laakiin mid ka mid weydiisan kartaa, ma kale oo run ahaantii ka jira? Jawaabta su'aashani in fudud yahay " Wondershare TunesGo "
Wondershare TunesGo waa tababare fudud oo xiiso leh Lugood oggolaanaysa in aad maamulato dhammaan xogta Lugood aad dhammaan aaladaha aad (iPads, iPhone iwm) oo aan haysan in ay dhex maraan Lugood waqti kasta. Waxaa intaa dheer, waxa ay ka caawisaa abaabulka maktabadda Lugood aad iyadoo lagu eegayo u maqan farshaxanka album, tags, songs nuqul ka maqan iyo kuwan raadkaygay iwm maqan oo wuxuu diyaariyaa si toos ah in click ee button hal. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in ay dib u kor xogta aad, maareeyo xiriirrada iyo sawiro ka mid qalab tufaax wareejiyo kale. Waxaa la socon kara Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, MAC OS X, iOs8 iyo sidoo kale telefoonada Android iyo Windows leh android 2.1 iyo wax ka sareeya.
Si aad u soo bixi TunesGo, u tag http://www.wondershare.com/tunesgo/ , waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad la muuqaalada xadidan ama aad kala soo bixi kartaa nooca caymiska bixisay $35.95 oo kaliya.
Kadib markii uu dhamaystay ah dajinta iyo rakibidda, furto TunesGo dooro "tayeeyo Lugood Library"
Isku mid ka mid ah qalab tufaax aad la leedahay Lugood Library updated. Ka dib markii initializing nidaamka iyo ku rakibidda darawallada loo baahan yahay, a "Start" doorasho tusi doonaa. Guji "bilow", TunesGo toos ah u bilaabi doonaa baar maktabadda Lugood gudahood qalab iyo laptop / computer u kala duwan.
Guji "nuqul Lugood" si ay u bilaabaan wareejinta files audio ka qalab aad si aad laptop / computer.
Kadib markii geedi socodka koobiyeynta ayaa dhameystirtay, warbixin kooban oo ku waxyaabaha soo guuriyeen muuqan doona slider menu TunesGo ah oo ay la socoto wargelin ah oo aad ka warrami habka koobiyeynta si guul ah isagoo dhameystiray.
Xusuusnow in qalab aad u baahan yahay inuu qabto Lugood horeba la maktabadda Lugood aad updated rakibay u TunesGo in la ogaado oo nuqul ka maqan files audio.
Haddaba, sida aad dareentay laga yaabaa, TunesGo ka dhigaysa in ay wax badan ka sahlan u dhiska maktabadda Lugood iyo in aad kharash ku click hal. Looma baahna in aad nuqul ka, tirtirto ama gurmad wax files, waxaa macquul ma qalad aadanaha oo aadan u baahan in ay ka wel ku saabsan xogta aad is kharribeen. Laybareeriga uu dhisay wakhti aad u gaaban inta aad ku aadi kartaa oo aad loo dhameystiro hawlaha kale ee waqtigaas.
Lugood Movies ah TV Marathon
> Resource > Lugood > Sidee u dhiska maktabadda Lugood